Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 28, 2018 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ချစ်ရသူတစ် ဦး သေဆုံးခြင်း၊ စာမေးပွဲမအောင်မြင်ခြင်း၊ ရင်ခုန်စရာပြိုကွဲခြင်း…မည်သူမဆိုဤစမ်းသပ်မှုများကိုအချိန်မရွေးကြုံတွေ့နိုင်သည်။ သင်ခက်ခဲသောအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်သင်ဝမ်းနည်းပြီးစိတ်ပျက်မိသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မုန်တိုင်းကျတဲ့အခါကျနော်တို့ရှေ့ကိုဆက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ လှုံ့ဆျောမှုပြန်လည်ဖို့ဘယ်လို?
မည်သူမျှအပြင်းအထန်ထိုးနှက်ခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးမိုးရွာပြီးနောက်ရာသီဥတုကောင်းသည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောနိုင်သည်။ ပြproblemsနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါတောင်ပေါ်တက်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတာသင်သဘောပေါက်လာတယ်။ ခက်ခဲပေမယ့်လက်တွေ့မကျဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိရင်
ခက်ခဲတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအပျက်သဘောခံစားချက်တွေ၊ ဒါကလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ မိမိကိုယ်ကိုမကောင်းသောခံစားချက်များလွှမ်းမိုးစေမည့်မေးခွန်းမရှိပါ။ ငါတို့ကိုစွန့်ခွာပြီးလိုက်ရှာရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများနှင့်သင်၏နာကျင်မှုနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုများကိုမျှဝေခံစားရန်သင်ခွင့်ပြုရပါမည်။ သင်၏နာကျင်မှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်လက်ထားခြင်းကမလွယ်ကူပါ။ သင့်စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြခြင်းသည်အားနည်းချက်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသိထားပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဒါဟာအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားအခြေအနေကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့သင့်အားပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဓာတ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုဖျက်ဆီးနိုင်သောအပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားချက်များကိုရှောင်ရှားရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အထီးကျန်မှုတွေကိုလည်းအကြံပြုသည်။ ကျနော်တို့ကသာမန်လူမှုရေးဘဝကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့ခွန်အားကိုရှာဖွေနိုင်သည်ကိုတခြားသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အထီးကျန်အနုတ်လက္ခဏာအတှေးအဖို့မြင့်တက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကွင်းဆက်ပြန်လာအဖြစ်, သူတို့ကစိုးရိမ်ပူပန် generate ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ရှာဖွေတာကနေသင်တို့ကိုတားဆီးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှု, စစ်တိုက်ခြင်းငှါရန်သူဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်မဟာဗျူဟာကိုရှာဖွေရပေမည်။ သငျသညျစိတ်ဖိစီးမှုရိုက်ပုတ်စီမံခန့်ခွဲလျှင်, သင်သိသိသာသာအသက်တာ၏သင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ယင်းလှုံ့ဆော်မှုရှာရှေ့ဆက်ဖို့အလိုရှိကြသည်တွင်၎င်းထိုသို့အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေးများကိုမွေးမြူဖို့လည်းလိုအပ်ပေသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့ကြကြောင်းအခြားရိုက်မှတ်မိဖို့အတိတ်ကာလမှသေးငယ်တဲ့ပြန်လာပါစေ။ ဤသည်ကောင်းစွာသင်ရဲစွမ်းသတ္တိပေးနိုငျသညျ။
အတိတ်၏ပြtheနာများပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ? စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်အတားအဆီးအသစ်များကိုကျော်လွှားရန်ကူညီနိုင်သည့်မရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏အောင်မြင်မှုများနှင့်အားသာချက်များကိုမှတ်မိရန်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအမှတ်တရများကိုအလွတ်ကျက်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အချိန်လေးဖြစ်သည်။
ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကျွန်တော့်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုပြဿနာများ၏အတိုင်းအတာအရေးကျနော်တို့ကဒီပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါရပေမည်။ ကျနော်တို့အတိတ်ကိုပြန်မအတွက် bounce မှစီမံခန့်ခွဲလျှင်, ဤအချိန်ကျရှုံးရန်မအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာလှုံ့ဆျောမှုရဖို့ရန် ပို. လွယ်ကူဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာအစတစ်ဦးပြင်းထန်စမ်းသပ်ပြီးနောက်မိမိအလှုံ့ဆျောမှုပြန်လည်ဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆအပြုသဘောအလငျး၌အမှုတို့ကိုမြင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဆငျးရဲဒုက်ခ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။
အမှန်မှာစမ်းသပ်မှုများသည်ပြproblemsနာများရင်ဆိုင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ? ၎င်းတို့သည်သင်၏အရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်သင့်အားလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နာကျင်မှုနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်မှုကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားသောအခါ၎င်းတို့တည်ရှိခြင်းကိုမကြာခဏမေ့တတ်လေ့ရှိသည်။
ဖတ်ရန် စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရှောင်ရှား / ပိုကောင်းစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲရန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်ကို5သော့ချက်
သင်၏အားသာချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်သင်အချိန်ယူရရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းသည်အစီအစဉ်တွင်ရှိသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်နှင့်သင့်ဘဝ၏ပုံမှန်ဘဝသို့ပြန်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်ကိုသင်သဘောပေါက်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်သာလိုအပ်သည်။
အခြေအနေအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်းထန်သောထိုးနှက်မှုကိုခံလိုက်ရသည်နှင့်ဒဏ်ရာများသည်မကြာသေးမီကရှိနေသေးသည်ကိုမမေ့သင့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အားနည်းချက်ရှိနေသေးပြီးခွန်အားလည်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။ နောက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကသင့်အတွက်ဆိုးဝါးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိထားစွာလုပ်ဆောင်ရမည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ခုန်စေပြီးတော့မဆိုအတားအဆီးတွေ့ဆုံသည့်အခါအလွန်နိမ့်ကျမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုလည်းဖိအားများနှင့်တင်းမာမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ သင်အချိန်ပေးဖို့ရှိသည်။ ပညာအရှိဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်မှီရည်မှန်းချက်များသတ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
အလွန်မြင့်မားစွာလောင်းကစားခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်္ဘောပျက်သို့တည့်တည့်ပြေးသွားမည်ကိုသိပါ။ အမှန်မှာထိုပန်းတိုင်သို့မရောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်မှာကြီးမားသည်။ သို့သော်သင်လုံးဝစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအတွက်စိတ်ပျက်စရာသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးပြီး "မင်းရဲ့အတိုင်းအတာမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်" လိုလှုံ့ဆော်မှုပေးတဲ့ဝါကျကိုပြောရမယ်။
သတ်မှတ်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်တိကျသောနည်းလမ်းများကိုတီထွင်ရမည်။ မင်းတို့စစ်ပွဲကိုသွားတော့မယ်၊ မင်းအောင်နိုင်ဖို့အတွက်မင်းမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေရှိရမယ်ထင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျင့်ဆိုးများကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ရမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုတိုးမြှင့်ရမည်။
ဖတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်-Making အဆိုပါညာဘက်ရွေးချယ်မှုကိုဘယ်လိုတိုက်ယူ?
ထို့အပြင်လှုံ့ဆျောမှုကောင်းတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမရှိဘဲအနိုင်ရခဲ့သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်ရပေမည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့သင်ယူပါ။ တိုင်းခြေလှမ်းပေါ်တွင်သင်ချီးမွမ်းဖို့တှနျ့ဆုတျမထားပါနဲ့။ ကျနော်တို့ကဖြစ်နိုင်သည်သို့သော်သေးငယ်တိုင်းအောင်ပွဲအရသာရှိရပါမည်။ သငျသညျအလုပျနှငျ့ရဲစွမ်းသတ္တိတွေအများကြီးသိရကြ၏။
ကျနော်တို့ကိုလည်းအနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံစဉ်းစားရပ်တန့်ရပေမည်။ ဒါဟာရေတွက်သောပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေစဉ်းစား, သူတို့ကအနုတ်သို့မဟုတ်အပြုသဘောဖြစ်ကြောင်း။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်တဖြည်းဖြည်းလှုံ့ဆျောမှုကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ပြင်းထန်သောထိုးနှက်ချက်အပြီးတွင်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာမဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးရမယ်၊ အားလုံးအထက်မှာပဲ၊ မင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုတက်ရမယ်။ ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်းသောပန်းတိုင်များချမှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နေ့စဉ်ရရှိနိုင်သောရည်မှန်းချက်ငယ်တစ်ခုသည်လုံလောက်ရုံထက်မကပါ။ သင်၏တန်ဖိုးများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သင်ယူခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လူတစ် ဦး သည်လူတစ် ဦး ၏အောင်မြင်မှုစွမ်းရည်ကိုယုံကြည်ပြီးမိမိ၏အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချတတ်ရန်နှင့်စည်းရုံးရန်သင်ယူရမည်။
ခက်ခဲတဲ့ကာလပြီးနောက်လှုံ့ဆျောမှုကိုရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ? စက်တင်ဘာလ 21st, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများ, Antidote ဆော့ဖ်ဝဲရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏စာလုံးပေါင်းတိုးတက်လာဖို့ကိုဘယ်လို။
သာ. ကောင်း၏သင့်ရည်မှန်းချက်များရောက်ရန်အဆင့် မှစ. ကိုယ်တော်၏အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင်။